Wakiillada Puntland oo la dhaariyey, Guddoomiye Ku-meel-gaar ahna doortay – Kalfadhi
Wakiillada Puntland oo la dhaariyey, Guddoomiye Ku-meel-gaar ahna doortay
Golaha Wakiillada cusub ee Puntland, oo xalay looga dhawaaqay Garoowe, ayaa maanta loo dhaariyey xilalkooda, waxaana la siiyey shahaadooyinkooda aqoonsiga Xildhibaannimo. Maxkamadda Maamulka Puntland ugu sareysa ayaa Wakiillada cusub ku dhaarisay maanta xaruntooda magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland.
Intaas kadib waxa uu Goluhu yeeshay kulankiisii ugu horeeyey, taas oo ka dhigan inuu isla maantaba u furmay Kalfadhigiisii 1-aad. Kulankaas waxay ku doorteen Guddoomiye Ku-meel-gaar ah, waana Xildhibaanka ugu da’da weyn Golaha, oo ah Xuseen Xaaji Yaasiin Diiriye.
Golaha ayaa hadda wada qaban-qaabada sidii ay u soo dooran lahaayeen Guddoon, taas oo uu qorshuhu yahay iney dhacdo 4-ta bishan oo ku beegan Jimcaha ina soo aaddan. Waxaa u sii xigi doona 2 kulan oo kale, oo ay midna ku dhageysan doonaan Musharraxiinta codkooda dooneysa, kan kalena ay mid ka mid ah Musharraxiintaas ugu dooran doonaan Madaxweynaha Puntland 2019-2013, marka la gaaro 8-da bishan oo ku beegan Talaadada dambe
Golahan cusub waxaa u tartamay 144 qof, waxaana 48 qof oo ka mid ah ay doonayeen 6 kursi oo ka mid ah 66-da kursi ee Golaha Wakiillada Puntland, taas oo muujineysa in ay soo xulista iyo ansixinta Xildhibaannada cusub caqabada calculus wateen. Baarlamaanka waxaa la qiyaasayaa in ay dhalinyaradu ka tahay wax ka badan 50%, laakiin hal gabar oo kaliya ayaa ku jirta Golaha oo dhan.
Puntland: Baarlaman ay dhalinyaradu qoondo fiican ka heshay, haweenkuse madi ku noqday